Fametrahana lamina ho fanamafisana ny ady atao amin' ny valanaretina Corona virus | Primature
Mahazoarivo, ny 19 Mey 2020 – Taorian’ny fanambarana izay nataon’ny Filohan’ny Repoblika ny alahady lasa teo, nilaza fa tafiditra ho isan’ireo Faritra mena noho ny fihanaky ny valanaretina Corona virus i Alaotra Mangoro, dia nanatanteraka iraka tao Moramanga, izay distrika nahita “cas positif” maro amin’iny Faritra iny, ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, androany; delegasiona izay nahitana ny ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Minisitry ny Fanajariana ny Tany, sy ny Asa Vaventy, ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny minisitry ny Rano, Fanadiovana sy Fidiovana, ny minisitry ny Harena Ankibon’ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika, ny minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa-tanana, ny minisitra Lefitra misahana ny Tanàna vaovao sy ny Toeram-ponenana eo anivon’ny Ministeran’ny Fanajariana ny Tany, sy ny Asa Vaventy, ary ny Sekreteram-panjakàna eo anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena, miadidy ny Zandarimariam-pirenana.
Nandritra izao fidinana ifotony izao, dia nitondra fanampiana ho an’ireo vahoaka tena marefo ireto solontenam-panjakana ireto, ary nisy ihany koa ny fivoriana niarahana tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana ao amin’ny Faritra Alaotra Mangoro. Nisy araka izany fifanakalozana nahafana namolavola paikady entina manamafy ireo fepetra izay efa noraisin’ireo tompon’andraikitra ao an-toerana ho fanamafisana ny ady atao amin’ity areti-mandoza ity.
Nambaran’ny Praiminisitra ary fa “zava-dehibe ny fifamenoana misy eo amin’ny mpitondra foibe sy ireo tompon’andraiki-panjakana eny ifotony satria tsy maintsy atao izay hanajanonana haingana ny fiparitahan’ny valan’aretina ao amin’ny Faritra Alaotra Mangoro, fa indrindra manerana ny Nosy”. Nankasitrahany ireo ezaka rehetra efa napetraky tompon’andraikitra ao amin’ny Faritra saingy mbola mitaky ezaka misimisy kokoa ny fampiharana ireo fepetra rehetra napetraka amin’ny maha voasokajy ho faritra mena an’i Alaotra Mangoro, indrindra eo amin’ny fanentanana ny olona hanatanteraka ireo fepetra mihatra ireo. Tahaka ny fampihenana ny fifamezivezena mba hisorohana ny fiparitahan’ny valan’aretina, raha tsy misy antony manokana voamarina mazava. Mila mailo ihany koa ireo eny anivon’ny “barrière sanitaire” sy ireo “barrière sécuritaire” amin’ny fanaraha-maso ireo fiara mifamezivezy. Hentitra ny Praiminisitra nilaza fa ny refy ahafahana mamaritra ny fahombiazan’ny paikady napetraka dia ny fifehezana ny tahan’ny “cas positif” sy ny olona misy ny soritr’aretina.
Tsy latsa-danja ihany koa ny ny lafiny ara-tsosialy, ka nanome toromarika ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Faritra indrindra fa ny ao amin’ny Distrikan’ny Moramanga ny Praiminisitra amin’ny fananganana ny komity Loharano, ary tsy ho ela dia apetraka ny vatsy Tsinjo ho fanampiana ireo tena marefo ho fiatrehana ny fiantraikan’izao valanaretina izao.
Noresahina nandritra izao fivoriana izao ihany koa ny mahakasika ny raharaham-panjakana eo anivon’ny Faritra Alaotra Mangoro, ny fanatsarana ireo seham-pampandrosoana rehetra, “na dia eo aza ny fisian’ny valanaretina izay tsy maintsy hatrehina dia tsy maintsy hatrehina ihany koa ny sehatry ny fampandrosoana”, hoy ny Praiminisitra teo ampamaranana.
← Fihaonan’ny Praiminisitra tamin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny « Institut Pasteur de Madagascar »
CONSEIL DU GOUVERNEMENT du Mercredi 27 Mai2020 →